Fitaovana fitsaboana loharano amin'ny rivotra, fifehezana, singa mpanatanteraka - Blch Pneumatika
Mitambatra andiany FR.L
Esory tsara ny rano sy ny sombiny. Ny singa sivana 40µm sy 5µm dia mora takalo sy soloina. Fametrahana tsindry marina sy mora. Ny menaka fanosorana dia azo averina fenoina nefa tsy miato ny famatsian-drivotra. Ny famafazana solika ao anaty zavona dia miantoka fanosorana tsara ho an'ny milina. Ny vilia fanoherana asidra sy alkaly ary lovia aluminium dia manome fiarovana tsara amin'ny tontolo miasa simia biolojika. Menaka fanosorana (Recommended): ISO-VG32
F mitambatra andiany FR.L
Ny tsindry miasa lehibe: 16bar, tsindry faran'ny max: bar 12 Afaka mameno menaka ao anaty diloilo izy io satria miasa hatrany ny rafitra mandeha ho azy. Ny fahombiazan'ny fanitsiana tsindry azo antoka amin'ny avo lenta. Avo ny fahombiazan'ny famongorana ny hamandoana sy ny voamadinika.
AFC-BFC series FR.L mitambatra
AC-BC andiany FRL mitambatra
Sivana Air AFR-BFR
C andian-dàlan'ny Air Lubricator
Ar / BR andian-dahatsoratra Air Regulator
Valve mitsivalana HSV
Valizy fanaraha-maso RE Series
3H-4H andian-tanana lever Valve
FV320-420 andian-tongotra Valve
CXSM20-50 Double Rod Cylinder
SC50-150 Standard Cylinder
P80 页 CU andian-tsarimihetsika Mount Free
Fitaovana famaohana vy iray
Tsy hita ny horonan-tsary, azo inoana fa tsy manohana horonan-tsary HTML5 ny browser-nao
Niorina tamin'ny Aogositra 2004 ny BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd, ao amin'ny faritra indostrialy fampandrosoana YUEQING no misy azy. Ny orinasa dia mandrakotra faritra 24000 ㎡, manana tobim-pamokarana 5 misy mpiasa mihoatra ny 300. Orinasa tsy miankina isam-paritra misahana manokana ny R&D, ny famokarana, ny varotra ary ny fikojakojana ny serivisy amin'ny singa pneumatic ..
MIARAHABA! Ny fenitra "Torolàlana ho an'ny mpanamory fiaramanidina anatiny momba ny fanodinana ny faneriterena mihatra" izay neken'ny orinasa anay dia nankatoavin'ny Fikambanan'ny kalitaon'ny vokatra Zhejiang amin'ny maha R ...
Niorina tamin'ny Aogositra 2004 ny BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd, ao amin'ny faritra indostrialy fampandrosoana YUEQING no misy azy. Ny orinasa dia mandrakotra faritra 24000